Farsamada Machadka Dhulka James Bowden wuxuu qiyaasayaa dhererka Kernza ee goob cilmi-baaris ah oo simitates saameynta daaqa ku soo saarka dhirta. Sawir sawir: Scott Seirer ee Machadka Dhulka
Sidee Beerta Dheeraadka ah u Heli Kareysaa Nadiifiyaha Wabiga Mississippi
"Maaha adduunka ballaaran oo webiga ah sida weyn
Sidii kii hirarka lahaa qotomiyey dhulkii aan ku dhashay "
- Kate Harrington, "Wabiga Mississippi"
Wabiga Mississippi waxaa lagu dhajiyay dhammaan dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha iyo bulshada ee Minnesota iyo Midwest. Ku dhowaad kala badh waddanku wuxuu ku xiran yahay webiga weyn iyo kaniisadeeda. Waxay ku qulqulaysaa qaar ka mid ah dhul-beereedka ugu caansan Dunida, iyo basaasku waxay soo saartaa inta badan ee dhoofinta beeraha ee Maraykanka.
Hase yeeshe, halka qaar ka mid ah beelaha Mississippi ay ku barwaaqoobeen, qaar kale ayaa ka soo horjeeda carrada wasakhaysan, biyo nadiif ah, iyo daadad sii xumaatay. Wax ka qabashada ciqaabta ciidda iyo biyaha ayaa u baahan istaraatiijiyado badan, iyo si ballaadhan u dhaqangelinta hababka beeraha waara ayaa tallaabo weyn ku ah jihada saxda ah. Beeralay badan oo ku yaala wabiga wabiga ayaa raadinaya siyaabo lagu hagaajiyo beerahooda iyo wax soo saarka si ay faa'iido ugu beeraan iyadoo ilaalineysa tayada biyaha iyo caafimaadka ciidda muddada dheer.
Wax ka qabashada ciqaabta ciidda iyo biyaha ayaa u baahan istaraatiijiyado badan, iyo si ballaadhan u dhaqangelinta hababka beeraha waara ayaa tallaabo weyn ku ah jihada saxda ah.
Mashruuca McKnight ee kobaca kowaad ee 2019, guddiga ayaa abaal-marin siiyey 27 deeqo oo dhan $ 6.1 milyan. (Waxaad ka heli kartaa liiska buuxa ee deeqaha la ogolaaday ee noo keydka macluumaadka.) Dhammaan lacagtan, $ 750,000 ayaa u baxay inay taageeraan dadka qaata barnaamijka Mississippi River-gaar ahaan kuwa ka shaqeeya beeralayda oo ku yaal baqda Mississippi ee ku saabsan dhaqanka ilaalinta.
"Deeqdeennu waxay na tusinayaan sida beeraleyda, cilmi-baarayaasha iyo u-doodayaasha ay si wadajir ah u wada shaqeynayaan wabiga wabiga Mississippi-hubinta nadiifinta, nidaamka webiga ee beelaha ku yaala bartamaha maraykanka," ayuu yiri Debby Landesman, madaxa guddida McKnight.
Beeralayda, milkiilayaasha dhulalka, saynisyahannada, iyo aqoonyahannada kordhinta ayaa ka wada xaajoodaya beeraha ganacsiga ee beeraha ganacsiga ee Iowa State University Research Armistong Memorial and Farming Farm in Lewis, Iowa. Ciriiriga Prairie wuxuu yareeyaa carrada iyo nafaqada luminta beeraha hadhuudhka iyo duufaanka iyadoo waliba taageereysa duur joogta. Credit credit: Matt Stephenson, Foundation State State Iowa
Si wadajir ah ula shaqeeya hay'adaheenna deeqbixiyeyaasha ah ee tooska u shaqeeya beeralayda, waxaannu dooneynaa inaan dib u soo celinno Wabiga Mississippi iyo hubinta nadiifinta iyo nidaamyada webiyada ee nadiifinta webiyada ee wabiga webiyada. Afarta deeqdani waxay muujinayaan shaqadan:
Kaydinta Musqusha: Beeraleydu waxay leeyihiin fursad ay ku isticmaalaan dhirta si ay u badbaadiyaan ciidooda uuna u ilaaliyo webiyadayada nadiif ah. McKnight ayaa la siiyay deeq laba sano ah $ 200,000 Jaamacadda Gobolka ee Iowa waayo Mashruuca STRIPS: koox cilmi-baarayaal ah oo qoraya iyo beeralayda beeralayda si ay u rakibaan caleemaha dhirta cawska ah ee dalagyada hadhuudhka iyo soodhaha. Dhalashadan dhalidda ah waxay siinayaan beeralayda fursado qiimo jaban si loo yareeyo nafaqo la'aanta in ka badan 85 boqolkiiba. Waxa kale oo ay bixiyaan waxtarka duur-joogta iyo faa'iidooyinka kala duwan ee bay'ada- oo ay ku jiraan deegaan suurtagal ah oo loogu talagalay pollinators iyo cayayaanka kale ee beeraleyda ah. Iyada oo dhiirigelisa beeraleyda, jaamacadu waxay la shaqaysaa Waaxda Adeegyada Khayraadka Dabiiciga ah ee Mareykanka ee US Department of Conservation Service si loo hubiyo in kuwa qaata dhaqankan ay heli karaan barnaamijka biilka kaydka beeraha.
Horumarinta Dalagyada Dabiiciga ah: Maxaa dhacaya haddii dalagyada cusubi ay si ku meel gaar ah u quudin karaan dadka, u dhisaan caafimaadka ciidda, ayna ilaaliyaan biyaha iyo hawada? Sida laga soo xigtay Machadka Dhulka, "Tirakoobka sanadlaha ah ee qiyaastii boqolkiiba 85 qiyaasta kalooraha cuntada ee dadweynaha, iyo badi badan oo dhulalka beeraha ah ee adduunka ah." Marka dalagyadaasi koraan nidaamyada dhaqameedka, waxay badanaa ku biiraan nabaad guurka, ka daadinta nafaqada, (taas oo ku dhamaata jawigeena). Machadka wuxuu rabaa in uu isbeddelo iyada oo la abuurayo nidaamyo beeraha ah oo isku dhejiya nidaamyada dabiiciga ah-soo saarida cunto dheeraad ah oo leh saameyn taban. Iyadoo laba sano ah $ 200,000 oo ah deeqda guud oo ka socota McKnight, machadka ayaa sii wadi doona horumarinta iyo bixinta qiyaasta dalagyada dilka ah-inta badan gaar ahaan khudradda abaaraha Kernza®, oo ah ina-adeer oo sanadle ah-oo rajo leh in hal maalin ay geli doonto suuqa ganacsiga adoo cabir weyn leh.
Holly Hatlewick, NWF Cover Crop Champion, waxay la hadlaan beeraleyda maalin mawduuc ah oo ay abaabulayaan Renville, MN, Land and Water Conservation District. Sawirka Sawirka: Jess Espenshade
Barashada diiradda beeraha: Sida laga soo xigtay Xiriirka Duur-joogta Qaranka, dabooli dalagyada dalagyada aan-badeecadda ahayn ee la beeray inta u dhexeysa dalagga beeraha ama xilliyada dhiciska - ka hortagga kiimikada iyo nabaad guurka. Hase-yeeshee, "in ka yar laba boqolkiiba dalagga ee Mississippi River Basin ayaa la beeray si loo daboolo dalagyada, taas oo keentay wasakheynta wabiga ee ka yimaada beeraha." Iyadoo laba sano oo deeq ah oo ka timid McKnight, federaalku wuxuu sii wadi doonaa barnaamijkiisa " taas oo abuuraysa shabakado waxbarasho beeraleyda ah. Iyaga oo beeralay Wisconsin, barnaamijkani wuxuu noqday mid ka mid ah hannaanka beeraha ugu fiican ee loogu talagalay ilaalinta.
U-doodista Dhaqannada Beeraha ee Sareeya: American Farmland Trust "Wax ka qabashada khatarta ugu wayn ee beeraha beeraleyda iyo beeralayda qoyska." Isbeddel siyaasadeed iyo waxbarashada dadweynaha, ayaa ururku ka caawiyay ilaalinta in ka badan 6.5 milyan oo hektar beer iyo beertiisa, sida laga soo xigtay boggeeda. Intaa waxaa dheer, kalsoonidu waxay ilaalineysaa waxsoosaarka beeraha iyada oo la ilaalinayo carrada caafimaadka leh iyo biyaha nadiifta ah iyo iyada oo wax loo barayo kuwa kale ee ku saabsan dhaqanka ilaalinta. Iyadoo deeq lacageed oo dhan $ 150,000 ay ka heshay McKnight, hay'addu waxay sii wadi doontaa udeedkeeda ku saabsan dhaqanka beeraha ee Illinois iyo horumarinta himilooyinka gobolka si loo yareeyo wasakheynta nitrogen iyo fosfooraska.
"Deeqdeennu waxay na tusinayaan sida beeraleyda, cilmi-baarayaasha, iyo u-doodayaasha ay si wadajir ah u wada shaqeynayaan wabiga wabiga Mississippi-hubinta nadiifin, adkeysi leh ee nidaamyada webiyada ee ku yaalla beelaha Maraykanka."
-LANDRIGA LANDESMAN, SIDA LAGU QAADO
Waan ku faraxsanahay inaan Dana Anderson soo dhaweyno gudigeena maamulayaasha. Dana waa qoraa madax banaan iyo barbaariye. Intaa waxaa dheer, xubin ka tirsan guddiga muddada dheer Ted Staryk ayaa ku soo laabtay guddiga ka dib markii uu macnihiisu yahay. Waxa kale oo uu ka shaqeeyaa guddiga maalgelinta McKnight. Waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa Luther Ragin Jr., oo ku biiray guddiga maalgashigayaga iyo gudigeenna maalgashiga howlaha, waxaanay keeneen khabiir iyo waayo-aragnimo ah saamaynta maal-gashiga.
Waxaan sidoo kale qabannaa shaqaale dhowr ah. Bishii Janaayo, Elizabeth McGeveran wuxuu noqday agaasimaha maalgashiga, Therese Casey wuxuu noqday agaasimaha maaliyadda. Nate Wade wuxuu hadda yahay sarkaal maalgashi, iyo Josh Rosamond waa iskaashato maalgashi. Grace Fredrickson waa lataliye xisaabtan, Joni Chacich waa macaliin magdhow iyo faa'idooyin.
Sida hore u sheegay, Rick Scott, madaxweyne ku xigeenka maaliyadda iyo waafaqsanaanta, iyo Vickie Benson, Agaasimaha barnaamijka farshaxanka, ayaa ka goosan doona kaalintooda dhamaadka Juun. Qorshaha ku-meel-gaadhka ah ee fikirka ah ayaa sii socon doona ka hor inta uusan Vickie tagin, waxaanu cusbooneysiin doonaa deeqaha Farshaxanka iyo lammaanayaasha si waafaqsan. Intaa waxaa dheer, Nan Jahnke, oo ah maamulaha barnaamijka Neuroscience iyo deeq-lacageedka loogu talagalay aasaasayaasha Minnesota ee aasaasiga ah, ayaa ka fariisan doona dhammaadka bisha Ogost. Waanu qadarin karnaa adeegga McKnight ee ka badan 10 sano.
Ugu dambeyntii, waxaan ku faraxsannahay in aan la wadaagno wararka sheegaya in Bernadette Christiansen, madaxweyne ku-xigeenno badan oo ka tirsan howl-gallada howlaha, ay ka fariisan doonaan bilaawga dambe bishan sababo la xiriira cudurka kansarka sare. Bernadette waxay hoggaan qiimo leh ka qaadatay McKnight sidii ay u kobcin lahayd isku-dheelitir sare oo lagu kalsoonaan karo, kor u qaadida dhaqanka shaqada iyo kordhinta shaqaalaheena kartida dhaqameed ee kala duwan iyo kala duwanaanta, sinaanta, iyo garashada isku-biirinta. Ka hor inta uusan ku biirin McKnight 2006, waxay qabatay jagooyin sare oo ku saabsan fanka iyo ururada isbeddelka bulshada waxayna ka shaqeeyeen lataliye ku saabsan horumarinta abaabulka iyo maareynta shaqaalaha. Waxaan u dirnaa fikradaha bogsashada iyo rabitaankeena ugu wanaagsan ee iyada iyo qoyskeeda.
Jaaliyadaha aan jeclahay-Bernadette, Rick, Vickie, iyo Nan-aad ayaa si weyn u seegaya! Waxaan u soo jeedineynaa mahadnaq aan ugu mahadcelineyno inta badan lacagaha joogtada ah ee ujeeddada hawlgalka.